Dalka Holland oo si weyn looga xusay Sanadguuradii 14aad ee Puntland [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Communities / Dalka Holland oo si weyn looga xusay Sanadguuradii 14aad ee Puntland [Sawiro]
Dalka Holland ayaa kamid ah wadamada sida weyn todobaadkan looga xusay munaasabada sanadguurada 14aad ee aasaaskii Puntland, magaalada Rotterdam ee dalka Holland ayey ka dhacday 25kii bishan Agoosto Munaasabad balaaran oo lagu maamuusayey xuska 14aad ee dhismaha ismaamul Dowladeedka Puntland.
Xafladan oo ah mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qeyb galay boqolaal dad ah ayadoo halkaasi laga soo jeediyey khudbado kala gedisan oo taabanayey mudnaanshaha xuska aasaaskii Puntland iyo waliba horumarka loo baahan yahay deegaanada Puntland in laga gaaro.
Xafladan ayaa waxaa sidoo kale lagu soo bandhigay barnaamij isugu jira Ruwaayado iyo heeso, ayadoo dadkii kasoo qeyb galay ay si weyn ulla dhaceen barnaamijka isu dheeli tiran oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada Jaaliyadda Puntland ee dalka Holland.
Abdiraxiin Saciid Jaamac oo ah Guddoomiyaha Dhalinyarada reer Puntland ee dalka Holland ayaa Horseed Media u sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin kasoo qeyb galka dadyowgii badnaa ee xafladan. Wuxuuna sheegay inay rajeenayaan in ay sii wadaan dadaalka ku aadan isu keenida dhalinta iyo Jaaliyadda reer Puntland ee ku dhaqan dalka Holland. Abdiraxiin ayaa sheegay in sidoo kale ay aad ugu faraxsan yihiin kala soo qeyb galka ay jaaliyadda guud ee Soomaaliyeed ee sida weyn uga soo qeyb galeen xafladan loogu talo galay sanadguuradi 14aad ee asaaskii Puntland.
Xaflada waxaa khudbado kasoo jeediyey xubno ay kamidyahaayeen Marwo. Khadiijo Sheekh Siciid Cali, Maryan saciid Mohamud, Bashiir xassan, Maxamed Qaasim, Maryan farax,Maxamuud Wayrax iyo xubno kale kuwaasoo ku dheeraaday muhiimada ay leedahay dawlada Puntland oo hal door u ah nidaamka Federaaliga ah ee dalka Soomaaliya iyagoona ilaahay uga baryey in hormarka Puntland uu sii jiro, waxayna baaq u direen shucuubta reer Puntland oo ay ka codsadeen inay dawlada la shaqeeyaan.
Xafladu intay socotay waxaa heeso wadani ah iyo kuwa Puntland loogu talagalayba ka qaaday fanaaniin caan ah oo ay kamid ahaayeen Xassan Wado, Aamina dhool, Laki Xaaji Wacays iyo fanaanka da’da yar ee reer Holland Sadiiq Iidle, Waxaana sidoo kale xaflada laga jeediyey Warbixino quseeya xaalka uu imika dalku marayo iyo taariikhdii kaladuwanayd ee ay Puntland soo martay.
Dhanka kale Jaaliyadda Puntland ee dalka Holland ayaa Baaq ay maanta soo saareen si weyn usoo dhaweeyey hambalyana u diray Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo maalinimadii shalay loo doortay Prof.Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari.
Cabdixakiim Cabdi Ismaaciil (ilkadhagax)